TOP NEWS: Dhageyso Madaxweynaha: “Suuragal ma ahan in la helo nabad iyo xasilooni buuxda haddii aanu maamul jirin” – Kismaayo24 News Agency
TOP NEWS: Dhageyso Madaxweynaha: “Suuragal ma ahan in la helo nabad iyo xasilooni buuxda haddii aanu maamul jirin”
by admin 19th March 2016 19th March 2016 047
Muqdisho, 19 March 2016: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta si rasmi ah u daah-furay Barnaamijka Qaran ee Dhismaha Maamullada Dowladaha Hoose ee loo yaqaano WADAJIR.
Barnaamijkan oo ay soo diyaarisay Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka ayaa ujeeddadiisu ay tahay dejinta qorshaha qaab dhismeedka dowladaha hoose, taas oo qeyb ka ah barnaamijka baahinta maamulka ee isku xiraya maamulka dhexe iyo gobollada dalka.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale u mahad celiyay dowlad goboleedyada dalka ka jira, gobolka Banaadir , gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan oo muddo saddex maalmood ah Muqdisho ku yeeshay shir ay ku gorfeynayaan qaabka loo dhaqan gelin karo hannaankan oo ah mid ay Soomaali leedahay, khubaro Soomaali ahna ay soo diyaariyeen.
“Waxan qirayaa shaqada adag ee ay qabatay Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka kuna aaddan ka guul gaarista barnaamijkan. Waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadka ka kala yimid degaannada kala duwan ee dalka ee ka xaajoonayay sida uu u shaqeyn karo barnaamijka WADAJIR, isla markaana su’aalo iska weydiiyay, go’aannana ka gaaray abuurista nidaam hufan oo shaqo, oo taageeraya hannaanka shaqada ee dowladaha hoose’’.
Waxaa uu Madaxweynaha sheegay in nidaamka federaalka ee Soomaaliya isku raacday loo baahan yahay in si wanaagsan loogu baahiyo degmooyinka iyo heerka gobollada, taasina ay keenayso inay fududaato baahinta adeegyada muhiimka ee shacabku u baahan yahay.
“Shacabku xaq bay u leeyihiin inay talo ku yeeshaan waxa ay doonayaan in loo qabto.Taas ayaa muhiim ka dhigeysa jiritaanka maamullada dowladaha hoose, lana xaqiijiyo inuu jiro isla xisaabtan. Dhanka kale waa in maskaxda lagu hayaa in horumar kasta oo loo baahan in amnigu uu sal u yahay. Si amni iyo xasilooni loo helana ay lagama maarmaan tahay in maamul la sameeyo’’, ayuu yiri Madaxweynaha.
Waxaa uu ugu dambeyn Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu shacabka kula dardaarmay inay maamullada dowlada hoose ee la soo dhisayo ay u dhiibtaan dad xilkas ah oo ammaanada ku wanaagsan, garanna kara baahida shacabka.
Munaasabaddan oo ay ka soo qeybgaleen xubno ka tirsan labada gole, iyo marti sharaf kale, ayaa waxaa sidoo kale hadalo ka jeediyay Wasiirka Warfaafinta ee Dowladda Federaalka, Maxamed Cabdi Xayir iyo Wasiiru Dowlaha Arrimaha Gudaha, Cabdirashiid Maxamed Xiddig.
Halkaan Hoose ka Dhageyso Codka Madaxweynaha
Daawo Ciidamada Puntland oo hormar ka sameyay Dagaalki ay kula jireen Al shabaa
TOP NEWS: Madaxweyne Xasan Shiikh oo Ku Tilmaamay Shabaabka Puntland weerarka ku qaady in ay yihiin Naf la Caari
Sawirro: Ra’isul Wasaare kheyre oo xalay booqday ciidamo loo diyaariyay sugtaanka Amniga Caasimadda
admin 11th May 2018
Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomalia oo si kulul uga horyimid go’aankii maanta kasoo baxay golaha wasiirada
Tifaftiraha K24 6th September 2017
XASAASI: Nabadoon Axmed Diiriye oo dhulka ku jiiday Siyaasiyiinta Dowlada kasoo horjeeda